Nhau -Zvinhu zvinokanganisa kurongeka kwemachining ezvikamu chaizvo uye NC machining zvinogona kusimudzira kushandiswa kwezvikamu.
Runhare: +86 (0755)-86959369
Precision Shaft Zvikamu
Zvikamu zvemuchina wekugaya
High Precision Zvigadzirwa
Zvinhu zvinokanganisa kurongeka kwekugadzira kweiyo chaiyo zvikamu uye NC machining zvinogona kusimudzira kushandiswa kwezvikamu.
Kushandura uye kugaya composite machining zvikamu
CNC lathe machining zvikamu
Precision zvikamu zvekugadzirisa
Precision milling muchina zvikamu kugadzirisa
Precision CNC machining zvikamu
CNC chaiyo zvikamu kugadzirisa
Izvo zvinhu zvinokanganisa iko kurongeka kwezvikamu zvekugadzirisa uye NC machining zvinogona kusimbisa kushandiswa kwezvikamu.
Kugadziriswa kwezvikamu zvemazvo kunonzi precision machining. Izvo chaizvo nekuda kweiyo yakakwirira yekugadzirisa maitiro uye maitiro ezvinodiwa, uye iko kurongeka kwezvigadzirwa kwakakwira zvakanyanya. Kurongeka kwezvikamu zvechokwadi kunosanganisira kurongeka kwechinzvimbo, ukuru, chimiro, nezvimwe. makambani anotungamira anosanganisa nekugadzirwa kwekambani uye ruzivo rwekugadzirisa kweanopfuura makore gumi, Izvi zvinotevera zvinokanganisa kurongeka kwezvikamu zvakapfupikiswa.
(1) Iyo inotenderera yekubuda kweiyo spindle yechishandiso chemuchina inogona kuburitsa zvikanganiso kune iyo machining chaiyo yezvikamu.
(2) Kusarurama kwechitima chekutungamira kunogonawo kutungamirira kukukanganisa kwechimiro chebasa rekushanda.
(3) Zvikamu zvekutapurirana zvinogona zvakare kutungamira kune iyo workpiece yekugadzirisa kukanganisa, inova zvakare chinhu chikuru chekukanganisa kwepamusoro.
(4) Mhando dzakasiyana dzezvishandiso uye zvigadziriso zvichavawo nemhedzisiro dzakasiyana pakurongeka kweiyo workpiece.
(5) Mukuita machining uye kucheka, hurongwa huchave hwakaremara nekuda kwekuchinja kwechinzvimbo chekushushikana, izvo zvinounza mutsauko uye kurongeka kweworkpiece kunogona kuve kwakasiyana madhigirii ekukanganisa.
(6) Iyo yakasiyana yekucheka simba inozotungamira kune pesvedzero yeworkpiece chaiyo.
(7) Iko kukanganisa kunokonzerwa nekupisa kwekupisa kweiyo process system, mukuita machining, iyo process system inoburitsa imwe deformation yekupisa pasi pekuita kweakasiyana kupisa masosi.
(8) The deformation of process system inokonzerwa nekupisa kazhinji inoguma nepesvedzero yeworkpiece chaiyo.
(9) Iyo deformation yemuchina wemuchina unokonzerwa nekudziya unokonzeresa deformation yeworkpiece.
(10) Iyo deformation yechishandiso ichava nesimba guru pane workpiece.
(11) Iyo workpiece pachayo yakakanganiswa nekupisa, iyo inonyanya kukonzerwa nekupisa panguva yekucheka.
CNC zvikamu kugadzirisa ndiko kunowanzo shanda kweCNC zvikamu vanogadzira maitiro ekugadzirisa tekinoroji. Iyi tekinoroji inogona kusimbisa kushandiswa kwezvikamu, kuratidza hunhu hwakakodzera, uye kuishandisa kune iyo ruzivo rweakasiyana maindasitiri. MuCNC lathe process, izvo zvinodikanwa zvezvikamu uye batch yeyakagadziriswa workpiece inozotemwa kutanga. Mabasa eCNC lathe achagadzirirwa munhanho yekutanga, izvo zvinodikanwa zvekusarudza CNC lathe zvichave zvine musoro, uye zvinodikanwa zvezvikamu zvakajairwa zvinosangana zvakanyanya muchimiro chechimiro, dhizaini rekugadzirisa uye nekurongeka kwezvikamu.
Zvinoenderana nezvinodiwa nemazvo, ndiko kuti, kurongeka kwedimension, kurongeka kwechokwadi uye kushata kwepamusoro kwechishandiso, kutonga kurongeka kweCNC lathe kunosarudzwa. Zvinoenderana nekuvimbika, kuvimbika ndiyo vimbiso yekuvandudza chigadzirwa chemhando uye kugona kwekugadzira. Kuvimbika kweCNC muchina chishandiso kunoreva kushanda kwakagadzikana kwenguva refu pasina kukundikana kana muchina wemuchina uchiita mabasa ayo pasi pemamiriro akatsanangurwa. Ndiko kuti, nguva yepakati pasina kukundikana yakareba, kunyange kana pane kukanganisa, inogona kudzorerwa munguva pfupi uye kushandiswa zvakare. Zvishandiso zvemuchina zvine chimiro chinonzwisisika uye zvakanakisa kugadzira zvakasarudzwa. Kazhinji, kunyanya vashandisi, kunowedzera kuvimbika kweCNC system.
CNC lathe processing materials i304, 316 Stainless steel, carbon steel, mhangura, aluminium, alloy, plastic, POM, etc. Zvisinei, maturusi emhando dzakasiyana anodiwa kune zvakasiyana-siyana zvemotokari kuti zvive nechokwadi chekururama kunodiwa nechigadzirwa chimwe nechimwe.
Nguva yekutumira: Jun-03-2021
Kushanda kwakachengeteka kweNC machining
1. Kushandisa komputa simulation system ...
Zvinhu zvinokanganisa kurongeka kwemuchina ...
Zvinhu zvinokanganisa kurongeka kwe ...